Nhengo dzeWOZA neMOZA Dzinoratidzira muBulawayo
Nhengo dzeWOZA neMOZA dzaratidzira neChipiri muguta reBulawayo, dzichicherechedza mazuva gumi nematanhatu ekudzivirira mhirizhonga inoitirwa vanhukadzi, kana kuti 16 Days of Activism Against Gender Violence.
Hurongwa uhu huri kucherechedzwa pasi rose. WOZA ne MOZA, dzinoti hapana asungwa mukuratidzira uku, vachitoti zvavashamisa ndezvekuti mukuru wemapurisa ataura navo, avakurudzira kuti vaparare, achiti vazoratidzire neChitatu, apo hurumende ichange ichicherechedzawo nguva iyi.
Mazuva gumi nematanhatu aya ndeekuyeuchidza veruzhinji nezvehuipi hwekushungurudza vanhukadzi, uye anobatanidzira mazuva eInternational Women Human Rights Defenders Day musi weChina, pamwe ne World AIDS Day musi wa 1 Zvita.
National Cordinator veWOZA, Mai Jenni Williams, vaudza Studio 7, kuti kuratidzira kwavo neChipiri, inzira yekucherechedza zvakare zuva ravakaparura gwaro ravo re People's Charter gore rapera, pamwe nekurangaririra nhengo yavo, Maria Moyo, uyo vanoti akashaya mushure mekurohwa nemapurisa munguva dzavairatidzira pamwe chete.
Nhengo yeMOZA, VaShepherd Ndhlovu, vaudza mutori wenhau we Studio 7, Carole Gombakomba kuti shoko ravo ranga riri rekuzivisa veruzhinji kuti kushungurudzwa kuri kuitwa madzimai, kwatekekeshera nyika yose sezvo vanhu vazhinji munyika vakatotarisana nedambudziko rekushungurudzwa mune zvematongerwo enyika.